Hashtag Qalabka Cilmi baarista iyo Maareynta - Liiska oo dhameystiran #Hashtag
Hashtag Research, Falanqaynta, Kormeerka, iyo Qalabka Maamulka
Khamiis, Janaayo 28, 2021 Khamiis, Janaayo 28, 2021 Douglas Karr
Hashtag ayaa ahaa ereyga sanadka hal mar, waxaa jiray a ilmaha loo yaqaan Hashtag, eraygana waxaa laga mamnuucay Faransiiska (mot-dièse).
Hashtags waxay sii wadaan inay leeyihiin faa iidooyin aad u badan markii si haboon looga adeegsado warbaahinta bulshada - gaar ahaan maadaama adeegsigooda uu ka sii balaadhay wixii ka baxsan Twitter iyo Facebook. Haddii aad jeclaan lahayd xoogaa aasaasi ah hashtag, arag Hashtag Hagaha in aan daabacnay. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa qoraalkayaga helitaanka hashtags ugu fiican wixii cusbooneysiin bulsho ah.
Yaa Hindisay Hashtag?
Sida ereyga muhiimka ahi muhiim ugu yahay helitaanka macluumaadka khadka tooska ah, hashtags sidoo kale waa muhiim. Waxaan ka qornay waa maxay hashtag waagii hore. Dadka iyo ganacsatadu waxay adeegsadaan hashtag si loo helo, laakiin sidoo kale waxay isticmaalaan hashtags si ay u helaan kuwa kale oo adeegsanaya teknoolojiyada raadinta bulshada.
Astaamaha Hashtag Platform:
Hashtag cilmi baaris, falanqeyn, kormeer, iyo qalab maamul ayaa leh qaabab kala duwan:
Hashtag Daalacanaya - kartida maaraynta iyo kormeerka isbeddellada ku saabsan hashtags.
Digniinta Hashtag - awoodda lagu ogeysiiyo, waqtiga dhabta ah, in lagu sheego hashtag.
Cilmi-baarista Hashtag - isticmaalka tirada ah ee hashtags iyo fure saameynta in iyaga xusid.
Raadinta Hashtag - garashada hashtags iyo hashtagyada la xidhiidha ee loogu isticmaalo isgaarsiintaada warbaahinta bulshada.
Darbiyada Hashtag - U samee waqti-dhab ah, daawada hashtag-ga ah ee dhacdadaada ama shirkaaga.
Qaar ka mid ah barnaamijyadan waa lacag la'aan oo waxay leeyihiin awoodo xaddidan, kuwa kale waxaa loo dhisay si loogu isticmaalo shirkad si dhab ah loo wado dadaallada suuqgeynta ee warbaahinta bulshada. Sidoo kale, maahan in qalab kastaa kormeero barnaamij kasta oo warbaahinta bulshada ah waqtiga dhabta ah… markaa waxaad u baahan doontaa inaad sameyso cilmi-baaris ka hor intaadan maalgashi ku sameyn aalad sidan oo kale ah si aad u hubiso inaad hesho waxaad u baahan tahay!
Agorapulse - Marka laga soo tago xirmooyinka buuxa ee qalabka warbaahinta bulshada, Agorapulse sidoo kale waxay leedahay hashtag kormeer iyo warbixin.
Dhamaan Hashtag - Dhammaan Hashtag waa websaydh, kaa caawin doona inaad abuurto oo aad lafo-gurto hashtag-yada ugu habboon uguna fudud ee ku habboon waxyaabaha aad ka kooban tahay warbaahinta bulshada iyo suuqgeynta. Waad abuuri kartaa kumanaan hashtags khuseeya oo aad si fudud nuqul uga sameyso oo aad ugu dhejiso qoraalladaada warbaahinta bulshada.
Brand24 - Hel helitaan deg deg ah oo ku saabsan tixraacyada internetka, kobci qanacsanaanta macaamiisha iyo iibka.
BrandMentions Hashtag Tracker - Qalabka Raadinta Hashtag ee Bilaashka ah si loola socdo Waxqabadka Hashtag.
BuzzSumo - BuzzSumo wuxuu kormeeraa kuwa kula tartamaya, xusaya magaca iyo cusbooneysiinta warshadaha. Digniintu waxay hubinaysaa inaad qabato munaasabado muhiim ah oo yaan lagugu burburin barafka bulshada.
HashAtIt.com waa mashiin raadin oo ka baaraya HASHTAGS (#) boggaga warbaahinta bulshada ee aad ugu jeceshahay sida Facebook, Twitter, Instagram, iyo Pinterest.
Hashafiska - Tusmada saxda ah, kobcinta bulshada, abuuro ololeyaal abaalmarin ku guuleysta & bandhigyo warbaahin toos ah oo toos ah.
Hashtagify.me waa aalad bilaash ah oo lagu baaro hashtag-yada Twitter-ka iyo cilaaqaadkooda. Falanqeyntu waxay ku saleysan tahay sambal 1% ah oo dhan tweets - ugu badnaan ay Twitter ku siiso bilaash.
Hashtags.org waxay bixisaa macluumaad muhiim ah, cilmi baaris iyo sida loo helo aqoonta si looga caawiyo shakhsiyaadka, ganacsatada iyo ururada adduunka oo dhan inay horumariyaan sumcadda iyo baraha bulshada.
Keyhole - Raadso hashtags, ereyada muhiimka ah, iyo URL-yada waqtiga-dhabta ah. Keyword's hashtag analytics dashboard waa mid dhameystiran, qurux badan, oo lala wadaagi karo!
Imtixaanka Godka Ka Bax:
RiteTag wuxuu hagaajiyaa habka loo helo astaamaha ugu wanaagsan ee lala socdo waxyaabaha la wadaagayo, iyadoo la qabanayo caqabadaha u gaarka ah calaamadaha shabakadaha muhiimka ah ee wax wadaagga, oo ay ku jiraan Twitter, Youtube, Instagram, Flickr… iyo kuwo kaloo badan.
Tagdef - Soo ogow waxa hashtags macnaheedu yahay, hel hashtags la mid ah oo ku dar qeexitaannadaada ilbiriqsiyo.
TrackMyHashtag - oo ah aalad gorfaynta warbaahinta bulshada ah oo la socota dhammaan dhaqdhaqaaqyada ka dhacaya hareeraha ololaha Twitter, falanqeynaya howlahaas, waxayna bixinayaan aragtiyo waxtar leh oo badan. TrackMyHashtag waxay awood u leedahay inay la socoto ololeyaasha warbaahinta bulshada oo dhameystiran si ay daqiiqad walba kuugu siiso faahfaahinta mowduuca. Waxay soo gudbineysaa macluumaad badan oo waxtar leh oo loo isticmaali karo in lagu falanqeeyo saameynta olole kasta oo warbaahinta bulshada ah, si loola socdo dhammaan howlaha istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada ee tartamada, ama sameynta istiraatiijiyad suuqgeynta warbaahinta bulshadaada ah. TrackMyHashtag wuxuu raacayaa tweets iyo metadata laxiriira eray kasta oo muhiim ah, hashtag, ama @mention, labadaba waqtiga dhabta ah iyo taariikh ahaanba wakhti kasta.
UnionMetrics Union Metrics waxay kugu xoojineysaa sirdoonka suuqgeynta bulshada ee aad u baahan tahay inaad la xiriirto dhagaystayaashaada oo aad dhisto meheraddaada.
Ku orod Warbixinta Sawirka Sawirka ee Bilaashka ah
Raadinta Twitter - inta badan dadku waxay fiiriyaan raadinta Twitter si ay uga helaan qoraallada ugu dambeeyay ee mawduuca, laakiin sidoo kale waad u adeegsan kartaa si aad u hesho akoonnada Twitter-ka ee aad raacdo. Waad riixi kartaa Dadka oo cadee xisaabaadka ugu sarreeya hashtag aad isticmaaleyso. Waxay sidoo kale bixin kartaa bartilmaameed lagu shaqeeyo haddii tartamayaashaada loo aqoonsado hashtag laakiin aadan ahayn.
Laba-laab waa goob aad runtii ka baari karto, iska diiwaangelin karto oo xitaa ku calaamadeysan karto hashtag gaar ah. Waxay sidoo kale leeyihiin qalab sida darbiyada tiirarka dhexdhexaadka ah ee aad uga faa'iideysan karto munaasabaddaada soo socota ama shirkaaga.
Trendsmap - Waxaad kubilaabaysaa muuqaalka gobolkaaga halkaas oo aad ka arki karto mawduucyada isbeddelaya. Waad rogi kartaa khariidadaha adoo u jiidaya aag kale ama ku dhaweynaya ama dibedda u adeegsanaya astaamaha lagu daray / laga jaray. Markaad aragto wax umuuqda mid xiiso leh guji mowduuca si aad uhesho macluumaad dheeri ah sida garaafyada mugga tweets gudaha iyo adduunka oo dhan, waxa mowduucu u badan yahay, sawirada, xiriiriyeyaasha, iyo tweets-ka ugu dambeeyay. Waxa kale oo aad arki kartaa halka kale ee mawduucan caan ka ah adiga oo gujinaya mawduuca ku dhex jira muujinta faahfaahsan, ama waxa kale ee ay dadku ugu soo qorayaan meeshan adoo gujinaya magaca goobta.
Geochirp - GeoChirp waxay kaa caawineysaa inaad ka raadiso dadka Twitter-ka waxyaabaha gaarka ah ee aag gaar ah.
Tags: brand24chris messinawarbixinno heer sare ahhashtag facebookhel hashtagsmarka hore hashtaggeochirpbaaritaanka googlegoogle + hashtagxashiishbarnaamijyada hashtagdayactirka hashtagkormeerka hashtagbaaritaanka hashtagmashiinka raadinta hashtagqalabka hashtaghashtagify.mehashtagsPinterest hashtagritetagsaffeerwaa sawirsi fudud loo cabiraybulsheedtabboorkatagdefkhariidadda isbeddelladatweetreachTwitterhashtag twittercilmi baarista twitterraadinta twitterduub
Aynu soo qaadanno Facebook, tusaale ahaan. Sanduuqa faallooyinka ayaa ah muuqaalka ugu habboon ee loogu adeegsan karo inuu yahay khidmadda adeegga macaamiisha. Taa bedelkeeda, hashtags-ka Twitter-ka waxay bixiyaan nidaam sumad gaar ah u leh wadahadallada.
Jun 13, 2013 at 12: 32 PM
Waad ku mahadsan tahay ka mid ahaanshaha 'Tagboard' - oo naxdin leh, oo aan hadda ku soo gaadhay qoraalkan! Weli waan sii xoogeysaneynaa waxaana hirgalinay dersin astaamo ah tan iyo markii tan la soo dhajiyay oo ay kujiraan dhexdhexaad, qaab nololeed, iwm. In kasta oo aan #hashtags ka soo jiidaneyno barxadooda ilaa Oktoobar, ogeysiiskani wuxuu dhiirrigeliyay isticmaalka #hashtags ee FB & waxaan aragnay kor u qaadis aan caadi ahayn oo sooo badan oo adeegsanaya #hashtag 12-kii saac ee la soo dhaafay.
Jun 22, 2013 saacadu markay ahayd 2:43 AM
Liiska weyn! Waad ku mahadsantahay dhajinta tan 😉
Oktoobar 24, 2013 at 3:01 AM
Aad baad u mahadsantahay ka mid noqoshada RiteTag, Douglas, iyo haddii aan awoodno wicitaanka fiidiyowga 'G,' waxaan jeclaan lahaa inaan qorshayaasheena ku socodsiino adiga; waxaan dooneynaa inaan u dhaqaaqno si aan u noqonno qashin cabbir natiijooyinka hashtag ah.
Shirkadda ugu Fiican Orlando SEO
Nov 14, 2013 at 6: 47 AM
Tani waa war fantastik ah "Waxay la socotaa inta jeer ee hashtag loo isticmaalo Twitter-ka waxayna bixisaa faahfaahinta ku saabsan hashtag." post weyn…
Maamulaha Guud / Aasaasaha / Martigaliyaha Barnaamijka Shabakada Bulshada
Oktoobar 18, 2014 at 8:55 AM
xiiso leh oo waxtar leh, mahadsanid.
17, 2015 at 9: 21 AM
Runtii waan jeclahay baloogaga - waa mid kamid ah kuwa aan diinta uraacayo laakiin waxaa jira hal shay oo aanan fahmin, maxaa yeelay qofna weligiis ma xusin tan - adiga maahan, maahan Buffer.
1. Waxay kugu qortay liiska (sababtoo ah otomaatig ahaan si daran oo qalafsanaan ah badanaa IFTTT iyo isbeddelkan "ogow aniga") -
2. Waxay kaa heleysaa kaqeyb qaadasho badan laakiin KELIYA sababtoo ah bots iyo dib-u-cusboonaysiinta otomaatiga ah.
Si aan u tijaabiyo aragtidan, waxaan dhistay boot aan waxba ka qaban laakiin aan dib u qoro Jeff Bullas muddo 2 bilood ah (maxaa yeelay qorayaasha Jeff waxay isticmaalaan hashtags ka badan inta aan aqaano) iyo bot-kayga ayaa lagu taxay in ka badan 1000 jeer OO waxay leedahay awood bulsho oo ka sarreysa tan sida laga soo xigtay Followerwonk! Qofna ma raaco waxba ma qabto laakiin RT Jeff Bullas iyo #growthhacking. Ha ku mashquulin inaad liis ku dhisto #socialmedia ama # e-mayl suuqeed - waxaad heli doontaa qashin
Ma doonayo in la i qoro #SSA dartii ama in la helo kaqeyb gal badan. Marka IMHO, hashtags wax qiimo ah oo dheeri ah kuma daro (marka laga reebo sheekaysiga Twitter iyo shirarka iwm). Waxaan ku qoray qoraal ku saabsan tan Dhexdhexaad.
Ritetag waa mid weyn laakiin maahan sababta oo ah waxay ku siinaysaa hashtags ka fiican (runti, hashtags-kooda kuma liisgareyso). Ritetag waa fiican yahay maxaa yeelay waxay kuu ogolaaneysaa inaad sawiro, memes iyo gifs ku darto tweets-kaaga si dhib la’aan ah.
17, 2015 at 2: 14 PM
Debbie - taasi waa talo fantastik ah akhristayaashayada. Adiguna waad saxantahay - sida aan u isticmaalno Ritetag, awoodda lagu daro sawirada waa wax cajiib ah. Anigu xoogaa waan qabatimay gifs-ka la kiciyey!
17, 2015 at 3: 34 PM
Waxaan leenahay wax kabadan hal shay! Aniguba qabatimay gifs. 🙂
Tilmaamo wanaagsan oo ku saabsan sida loo dhex maro miinadan.
Sep 6, 2016 at 9: 48 AM
Ma jiro cilmi baaris keyword ah oo dhameystiran iyada oo aan la helin soo jeedinta raadinta, gaar ahaan marka laga hadlayo raadinta moobiilka, halkaas oo dadku inta badan u isticmaalaan kuwa si waqtiga loo ilaaliyo. Ma lihi lambarrada laakiin waxaan xasuustaa in dadka taleefannada gacanta isticmaala ay aad u badan guji talooyinka raadinta badanaa talooyinkaasina ay aad uga duwan yihiin weydiimahaaga caadiga ah. Tusaale: https://serpstat.com/keywords/questions/?query=bluetooth+speaker&se=g_us
Sep 15, 2016 at 2: 08 AM
Maqaal aad u xiiso badan! Waxaan u arkay inay waxtar weyn u leedahay kuwa ku jira qaybta SEO iyo Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada.
Aad baad ugu mahadsan tahay tan. Waxaan rajeynayaa inbadan oo kamid ah maqaalkaaga mudane!
Shaqo wacan! Waan akhriyay dhammaan aaladaha la xuso. Sii wad!
Waad ku mahadsantahay wadaagida macluumaadkan waxtarka leh. Markaad ka hadlaysid aaladaha gorfaynta hashtag, waxaa jira aalad kale oo bilaash ah oo aan jeclaan lahaa inaan kuu soo bandhigo.
Magaceeda https://www.trackmyhashtag.com/ - waa qalab gorfaynta hashtag ah. Waa tan ugu fiican in laga soo qaado nooc kasta oo ah xog ishtag ah waqtiga-dhabta ah ee Twitter lana falanqeeyo si loo soo saaro tirakoobyo waxtar leh
Waan ku faraxsanahay haddii aad eegto qalabkan oo aad ka bixiso ra'yi-celintaada qiimaha leh.
Jan 31, 2021 saacadu markay ahayd 1:19 PM
Waxaan ku daray aaladda oo aan cusbooneysiiyay maqaalkan, mahadsanid!
Febraayo 23, 2021 saacadu markay tahay 2: 57 AM
Waad ku mahadsan tahay ka mid ahaanshaha Trackmyhashtag. Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko 🙂